WAX SOO SAARKA SALIIDDA GABBALDAYAHA EE UKRAINE AYAA KORDHAY 20% - UKRAINE
Maanta, Ukraine qaadataa meesha mid ka mid ah kuwa dhoofiyayaasha ugu weyn ee saliidda gabbaldayaha. Sida laga soo xigtay ururka "Ukrolyaprom", sannadkii 2016, Ukraine ayaa ku guulaysatay inay dhoofiso 4,800,000 tan oo badeecado ah, tanina 23% wax ka badan sannadka 2015 iyo rikoodh dhammaystiran oo dalka ah. Wadarta dhoofinta ayaa ka dhigtay wax ka badan tan sannadkii hore (48 bilyan oo doolar, marka la barbardhigo 4.2 bilyan oo doolar).
Inkasta oo saadaalinta saadaasha, mugga wax soo saarka saliideedka aan loo baahneyn ee saliidda ee Ukraine ee sannadka 2016 ayaa ahaa 4,400,000 ton. Sida laga soo xigtay Adeegga Tirakoobka Qaranka, kororka ayaa ahaa 20.2% marka la barbar dhigo sanadkii hore. In la isbarbardhigo: Bishii Diseembar, 557,000 tan oo saliid ah oo saliid ah ayaa la soo saaray, taasoo 5.3% ka badan bishii hore, iyo 47.8% in ka badan December.